Mogadishu Journal » Faah faahin:- Qarax lala eegtay AMISOM
Mjournal : -Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Qarax Miino oo Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM duhurnimadii maanta lagula eegtay duleedka degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Qaraxa kadib rasaas Ciidamada Midowga Afirka ee AMISOM ayaa la sheegay inay fureen rasaas, taasi oo ay kaga jawaabayeen qaraxa Miinada ah ee lala eegtay, inkastoo rasaastaasi aysan jirin cid wax ku noqotay.
Goobta Qaraxa lagula eegtay Ciidanka AMISOM meel aan sidaas uga fogeyn waxaa saakay aroortii qarax lagula eegtay Gaari Dheyno ah oo ay saarnaayeen laba qof oo shacab ah, Darawalkii Gaariga kaxeynayay ayaa geeryooday.
Dadka ku nool degaanada Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dhibaato adag ku qaba, xilliyada ciidamada AMISOM qaraxyada lala eegto, waayo waxa ay dhib kasoo gaarta rasaasta ciidamada AMISOM ay furan.
Inta badan ciidamada Al-Shabaab ayaa qaraxyada noocaan oo kale ah u dhiga kolonyada gaadiidka AMISOM ee wadadaasi ku safra, weli maamulka Hirshabeelle lama uusan imaan talaabo cad oo uu wax kaga qabanayo dhibaatada ka taagan wadadan.